Yini okufanele uyenze lapho i-hemp ihlola kusashisa? Amazinga we-THC kanye nebhizinisi lakho
Okufanele ukwenze lapho i-hemp ihlola ukushisa
Ukuhlolwa kwe-Hemp kuyashisa lapho amazinga ayo e-THC edlula umkhawulo we-0.3% we-delta-9 THC. I-hemp eshisayo kufanele ibhekwe kakhulu ngemoto ukuze ungalimazi ilayisense lakho.
Kuyini Hot Hemp?
Buka Ummeli Wezimboni zeCannabis, U-Tom, chaza okufanele ukwenze lapho i-hemp ihlola kushisa izinga layo le-delta-9 THC.
Shayela mayelana nokuhlolwa kwe-hemp yakho kuyashisa
Ufuna Ulwazi lwebhizinisi le-Hemp - Chofoza lapha.
"I-Hot Hemp" kusho ukuthi i-hemp amazinga e-delta-9 THC eqe umkhawulo ongu-0.3% obekwe umthetho wezwe nowesifundazwe. Imithetho yombuso ivame ukuvumela ukweqiwa okuthile, ukulungiswa kabusha, kanye nokuvikelwa ekulimeni i-hemp ngokungazi okuhlola kushubile emazingeni ayo e-THC. Kukhona ukudideka okuningi ngenxa yezindlela zokuhlola ezikhona kanye nokuhlangana komkhawulo ophansi phakathi kwe-delta-9 THC uma kuqhathaniswa ne-tetrahydrocannabinolic acid (THCa) edala izinkinga ngokuhlola isitshalo se-hemp ukuhambisana nencazelo ejwayelekile ye-hemp yezimboni - okuyi-cannabis ne-THC eyakhiwe ngaphandle kwayo, noma okungenani i-99.7% yayo. Ukutshala kusuka enzalweni uma kuqhathaniswa nama-clones noma amasiko wezicubu kuphakamisa ingozi ye- "hemp eshisayo." Isizukulwane sohlobo F, i-F1 uma kuqhathaniswa ne-F5 ngokwesibonelo, naso sinegalelo ekusimeni kofuzo lwe-hemp's THC genetics.
ungakugwema kanjani ukushisa kwe-hemp
Thenga isivumelwano esibhaliwe
Sebenzisa imbewu ye-hemp eqinisekisiwe
khulisa i-hemp ngendlela ekhulwe ngayo ngenkathi iqinisekiswa
gwema ukucindezela izitshalo zakho
isivivinyo ngesikhathi sokuqhakaza kwe-HPLC
uqaphe ngokucophelela i-hemp ukuze ivuthwe
landela izidingo zokubika zokuvuna zombuso wakho
uma ukuhlolwa okushisayo kuza nokuzisola uma kungenzeka uphinde uvivinye futhi
shayela igqwetha lakho uma kuvela ubunzima ukungqongqoza
Amathiphu E-Hemp Evivinya Ukushisa
Abalimi abaningi manje babhekana namaqiniso uma kukhulunywa ngokuhlolwa kwe-hemp. Ukuhlolwa kwe-hemp yabo kuyashisa ezikhathini eziningi, futhi yilapho izikhulu zifika kule ndawo. Ukuze ugweme lesi simo, kufanele wazi ukuthi yini okufanele uyenze lapho i-hemp yakho ihlola ukushisa. Nazi izimpendulo.
Yini Imithetho Esemthethweni
Ezimweni eziningi, umkhawulo osemthethweni we Amazinga we-THC ku-hemp yi-0.3%. Lokhu kusho ukuthi i-hemp yakho kumele ibe namaphesenti ngqo noma inani eliphansi le-THC. Ukuhlola kwenziwa ngezindlela ezahlukahlukene, kepha iningi lazo lilinganisa izinga lezakhi ezise-hemp. Ukwahlukaniswa kwama-cannabinoids, ama-terpenoids, nama-flavonoids kuyindlela ejwayelekile yokunquma ukuthi i-hemp inokusatshalaliswa okwanele kwezakhi.
Ukulinganisa lezi zinhlaka kungathinta ukwakheka kwe-hemp. Yilapho kuvela khona izinkinga. Uma ukuhlolwa kunganele, i-hemp yakho ingakhombisa amazinga aphezulu we-THC, okukubeka ethubeni lokucela usizo. Iningi labameli lingakusiza ekuxazululeni le nkinga ngoba ukuhlola kungashintsha wonke amazinga we-THC we-hemp. Kuhle ukusebenzisa izindlela zokuhlola ezisemthethweni ezikunikeza ukuphepha okugcwele uma kufikwa kumazinga we-THC ku-hemp yakho.
Abalimi ezweni lonke banezinhlobo eziningi zembewu futhi ukutshala imbewu ngayinye kungaba nzima kakhulu. Esikhathini esiningi, imbewu entsha efakwa emhlabathini idlulisela amakhemikhali amaningi futhi inamazinga aphezulu e-THC. Lokhu kubonakala ikakhulukazi ngonyaka wokuqala wokutshala.
Ukuhambisana imithethonqubo, abalimi kumele basebenzise imbewu efakazelwe uma kukhulunywa ngokuhlolwa kwe-THC. Ngasikhathi sinye, kufanele banake izindlela zokuvuna ezingakhulisa noma zehlise umphumela wokuhlolwa kwe-THC.
Ngemuva kokuphothula inqubo yokulawula, i-hemp engaphephile "ukusetshenziswa" kufanele ibhujiswe, okuyinkinga enkulu kubalimi abatshalile imali eningi yokukhulisa jikelele. Kufanele zisuse yonke imbewu bese ziqala ngaphezulu kwesizini ezayo.
Ukuba embonini ye-hemp kukunika amathuba amaningi wokuhlola imakethe. Kwezinye izikhathi, i-hemp ingahlola ukushisa kepha le hemp ingasetshenziselwa imikhiqizo ehlukahlukene ehlukahlukene. Uma wenza isenzo sokulawula ukukhulisa i-hemp yokuzijabulisa, ungaba ne-hemp evivinya ukushisa.
Ngakolunye uhlangothi, uma imbewu yakho kuthiwa isetshenziselwa ukwelashwa, awukwazi ukudlala. Kulokhu, amazinga we-THC kumele abe ngqo. Indlela enhle yokugcina izinga lisendaweni ephephile ukubheka isinyathelo ngasinye sokukhula.
Ongakwenza Uma Izilingo Zakho Ziyavutha
Uma ukuhlolwa kwe-hemp yakho kusha, unezixazululo ezihlukile. Enye yazo ukuthola umbono wesibili uma kuziwa ekuhlolweni. Ungathumela i-hemp ngokuhlolwa okwengeziwe okuzohlola izakhi ze-THC. Uma ukuhlolwa kwesibili kukhombisa imiphumela efanayo, i-hemp yakho ngokuqinisekile inamazinga aphezulu we-THC.
Enye into ongayenza uma i-hemp yakho ihlola ukushisa ukuxhumana nomuntu othengisa imbewu. Abathengisi abaningi banesibopho sekhwalithi yembewu, futhi akufanele bavumele ukuthengisa imbewu engafanele kubalimi. Uma bekwenza lokho, bephula umthetho, futhi ungaqala icala. Abathengisi bembewu kufanele bahambisane nemithetho esemthethweni uma kukhulunywa ngenani, ukwakheka kanye nokwehlukanisa imbewu. Kufanele bakwazise ngezakhiwo zembewu oyithenga kubo.
Uma unenkontileka nomthengisi, kuhle ukuyifunda yonke indawo futhi uhlole izakhi. Imithetho nemigomo kuchazwe ngokuqinile futhi akukho ndawo yemibukiso. Uma kwinkontileka kuhlala ukuthi imbewu yakho ikhule kahle futhi ihlakulelwe kahle, khona-ke unelungelo lokwazi ukuthi i-hemp ingafinyelela kanjani emazingeni anqatshelwe e-THC.
Isinqumo esihle kakhulu ongasenza uma i-hemp yakho ihlola ukushisa ibiza abameli bakho. Shayela igqwetha elifundiswe kulo mkhakha, ukuze likwazi ukukunikeza ukwesekwa okufanele. Ukukhula i-hemp kuyinqubo enzima futhi izimiso zidlala indima ebalulekile. Ummeli wakho kumele aziswe kuleli cala, ikakhulukazi uma ucabanga ukuthi wonakele ngale ndlela.
Lapho i-hemp yakho ihlola kushisa, ikhambi elingcono kakhulu ukubhubhisa i-hemp. Ukucekela phansi kungaba nzima kakhulu ngoba utshale imali nesikhathi esiningi. Kodwa-ke, ukuphela kwendlela yokususa i-hemp enganele futhi ugxile ku-hemp okuya ngemithethonqubo.
Lapho ucekela phansi i-hemp, qiniseka ukuthi akusalanga mkhondo. Ezindaweni lapho kuhlala khona i-hemp enganele, inhlabathi igcina izici ze-hemp futhi zonke izimbewu zesikhathi esizayo zingathola izici zangaphambilini ze-hemp. Ngaleso sizathu, kubalulekile ukuthi "uyihlanze" ngokuphelele indawo.
Ezikhathini lapho i-hemp yakho ivivinya ukushisa, kungcono ukuthola ukwesekwa kwezikhulu ezilawulayo. Uma bethola imbewu edlula izinga le-THC, bangakuhlawulisa ngokwezimali. Iningi labalimi lithola izinhlawulo eziphansi kakhulu, ikakhulukazi uma amazinga eTHC engekho kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, abalimi abangazisebenzisi izilinganiso zamaphoyisa uma kukhulunywa ngokucekela phansi i-hemp bangabhekana nezinkinga ezinkulu zomthetho.
Yini Ongayenza Ukuze Hemp Uphephe
Ukugwema ubunzima, kungcono ukhethe ngokucophelela imbewu ye-hemp. Enye imbewu inokonyuka okukhulu emazingeni e-THC, ikakhulukazi ngemuva kokuvunwa. Ngaleso sizathu, kuwukuhlakanipha ukunamathela imbewu efakazelwe futhi ihlolwe ethobela imithetho.
Ukuba ne-hemp enamazinga aphezulu we-THC kuyingozi futhi kuthinta ibhizinisi lakho. Ukunikeza isikhathi esithe xaxa ukuvimbela izinkinga kungcono kakhulu kunokubhekana nezinkinga zomthetho.
Ngaleso sibonelo, sebenzisa imbewu efanelekile bese usebenzisa izindlela ezifanele zokukhula nokuvuna. Ngenxa yalokho, i-hemp yakho ngeke ivivinye kushisa futhi uzoba nezinketho eziningi zokuthengisa i-hemp kubathengisi abaningi. Lapho i-hemp yakho ivivinya ishisa, sebenzisa wonke amandla abameli nemithethonqubo ukuxazulula inkinga. Ngale ndlela uqinisekisa ukuthi uphephile kule nqubo.
okufanele ukwenze lapho i-hemp yakho ihlola kusha
Ngakho-ke ubungalindelanga ukuthi isivuno sakho semali sizokhula insangu engekho emthethweni - kulungile, imithetho eminingi ivumela ukulima budedengu kwe-hemp eshisayo. Kepha ngaphambi kokuthi siqhubeke nalokhu - khumbula ukuthi lolu ulwazi hhayi iseluleko sezomthetho, ukuze uthande uma ukujabulela okuqukethwe futhi ubhalisela ezinye izindaba zokugunyazwa kwe-cannabis.
Namathela kuze kube sekupheleni futhi ngizokutshela indlela enhle yokufaka ipulazi lakho le-hemp kusuka kule ngozi eshisayo ye-hemp.
Ukusikisela: indlela enhle yokukufaka ekushiseni kwe-hemp eshisiwe yinkontileka yokuthenga ebhaliwe
Okokuqala qiniseka ukuthi ukuhlolwa kwakho kuvela ebhodini lokuhlola elihle futhi akuyona eye-THC ephelele, kodwa i-delta-9 THC - leli yikhemikhali lomlingo elitshela ukuthi une-hemp noma insangu. Isivivinyo bekungafanele senziwe ngeGesi Chromatography - kepha i-chromatography engamanzi ephezulu, mhlawumbe nge-spectrometry enkulu - I-LC-MS ngamafuphi. Noma ngabe uyayethemba imiphumela yelebhu - thola isivuno siphinde sihlolwe - mhlawumbe bekungukuqubuka nje futhi umbono wesibili uzobonisa okuhluke ngokuphelele - izakhi zofuzo ku-hemp azifani, ikakhulukazi lapho zikhula ezimbewini.
Ngaphezu kwalokho, isivuno se-hemp sika-2019 e-United State siqhuma kusuka cishe Amahektare angama-50,000 2018 ngonyaka wezi-200,000 kuya ngaphezulu kwama-2019 ngonyaka ka-XNUMX. Ukufunwa okuthe xaxa kwembewu ye-hemp kungenzeka ukuthi yabona enye imbewu ithengisiwe engahambisani nokukhangiswa kwayo futhi yayingalingani njengabesifazane noma iphansi ku-THC njengoba yayizoba ngemuva kweminyaka embalwa yokulungisa kahle izakhi zofuzo.
Unalokho engqondweni, kufanele ubheke inkontileka yakho yokuthenga imbewu ye-hemp ngemuva kokuthola umbono wesibili - lokhu kufanele kukutshele lokho okuthengiswe ngumthengisi wembewu - amazinga we-THC alindelekile namaphesenti wembewu yabesifazane - kufanele futhi inikeze lokho okubizwa ngaphansi kwe- Ikhodi Yezentengiso Yeyunifomu (i-UCC) njengokungahambisani izimpahla. Kufanele kube ukwephula inkontileka enikeza umthengi amakhambi athile.
Okushoyo - awenzanga isivumelwano esibhaliwe nomthengisi wembewu yakho futhi walima yonke imali oyongele impilo yakho kule bomp ngaphandle kwesisihla sephepha. Yebo, abameli bangasiza kakhulu uma kukhulunywa ngokuphoqelela amalungelo enkontileka - kepha asikwazi ukuhamba ngesikhathi. Uma ingekho inkontileka ebhaliwe, izinhlinzeko ezizenzakalelayo ze-UCC zizohlinzeka ngemininingwane ethile yokusebenza kwenkontileka yakho. Sicela usebenzise inkontileka ebhaliwe lapho uthenga imbewu ye-hemp ngokuzayo - lena ngasentshonalanga yasendle, ngakho-ke qaphela lapho uqhuba ibhizinisi.
Ngakho-ke ngemuva kokuthi uthumele umbono wesibili, futhi uthole ikhophi yenkontileka yakho yokuthenga imbewu, shayela abameli bakho ukuze babone ukuthi bacabangani ngakho.
Yini leyo - awunaye ummeli ngoba nawe uyakwazi ukufunda kahle, awusiye yini umfana futhi owayengenayo inkontileka ebhaliwe - kulungile, kulungile - Ube nesihogo sosuku - cha nginomqondo wokukuthinta ngomunwe ngokungavali ngemuva kwakho ngaphambi kokuya ebhizinisini nabafana bezinkomo.
Xhumana nommeli we-hemp - ngalokho ngiqonde ukuthi ummeli onolwazi lwebhizinisi ekuphoqeleleni izinkontileka - futhi ngethemba lokuthi angaba nolwazi oluthile kwezolimo noma lwe-hemp ukuze bakwazi ukuqonda ama-nuances embonini.
Ummeli wakho uzokwazi ukukusiza ukuthi uzulazule hhayi kuphela imithetho yezwe lakho - noma i-Federal Regulations uma izwe lakho lifaka uhlelo lwabo lwe-hemp - kepha nemithetho kanye nemithetho yesivuno sakho se-hemp - okungenzeka inikeze i-hemp eshisayo okungukuthi ukhule ungenacala.
Ingakanani i-hemp eshisayo e-USA?
Njengecala ngicabanga ukuthi u-2019 kungenzeka ube unyaka omkhulu wezitshalo wensangu otshalwe e-United States - kepha lokho kungenxa yokuthi amahektare amaningi esitshalo se-hemp cishe azovivinya ukushisa ngenxa yokuthi imboni ye-hemp isha kangakanani.
Okulandelayo, sekuyisikhathi sokuxhumana nomthengisi wembewu yakho. Ibhizinisi alibathandi abameli njengabantu abalandelayo - ngakho-ke ungaqali ngencwadi ethile yokufuna ukusongela. Ngokufanelekile, usuvele ufake izigaba ezifanele kwisivumelwano sokuthengwa kwembewu ye-hemp uma kwenzeka into enjengale. Ubhekene nezakhi zofuzo lapha - izinto zigxuma kwesinye isikhathi lapho imbewu ibandakanyeka. Uma futhi usebenza ngaphandle kwenkontileka ebhaliwe, ngethemba ukuthi inkampani yembewu oyithenge kuyo yinhle futhi ikusiza ukuthi ubuyise izindleko zakho ezilahlekile - esikhundleni sokubhala inqwaba yezibuyekezo ezimbi nokuthunyelwe ezinkundleni zokuxhumana. Uma izinto zihamba kabi, ukumelwa ngokomthetho akuyona into engcono kakhulu ongayenza.
Uyabona ukuthi umonakalo wakho ungafaka inzuzo elahlekile - kepha lokho kucatshangelwa ngempela ngemboni entsha sha - futhi cishe akunakwenzeka ukufakazela, kepha izindleko ezinzima njengembewu yakho nezakhi zakho zomzimba, umsebenzi wakho - lokhu kungumonakalo okhona kalula onengqondo ukuthi ungawuthola.
Ngemuva kokuzama ukumboza izisekelo zakho nokuqinisekisa i-hemp eshisayo ngombono wesibili. Ngemuva kwalokho kufanele uthobele imithethonqubo yombuso wakho ukuze uzivikele njengomkhiqizi onganaki - khumbula .2% we-delta-3 THC umkhawulo phakathi kwe-hemp nensangu - ngaphansi komthetho wesifundazwe okungenani.
Ngakho-ke lowo mkhawulo phakathi kokunganaki nokuhlosa umugqa wokuthi uma weqa - ubeka engcupheni icala lobugebengu - okungafanele ukwenze ngenxa yevolumu ye-hemp ekhula ukuthi isisindo ubugebengu obunzima kakhulu - ngisho nasezindaweni zomthetho ngoba zidinga amalayisense ongenawo . Ngakho-ke ungabi budedengu uma uqiniseka ukuthi i-hemp iyashisa kakhulu - kufanele ulandele umthetho futhi uvikele indlela yakho…. Izinqe.
Ngakho-ke lokho kusho ukuthi kuzofanele ubhubhise i-hemp yakho - futhi ngeke ukwazi ukuyitshala leyo mbewu ngonyaka ozayo ngoba izifundazwe eziningi zidinga ukuthi ube nesisekelo esihle sokholo, noma izitifiketi zembewu, zokuqinisekisa ukuthi yini okhulayo kuzoba yizimboni Hemp hhayi insangu. Izwe linemikhawulo yokuthi ungakhula insangu budedengu kanjani futhi ucabange ukuthi yi-hemp ngaphambi kokufaka ilayisense lakho engozini.
Thola ukuthi yini izwe lakho elidinga ukuyichitha, noma ukutakula lokho ongakwenza.
Mhlawumbe uhlubula ama-hemp emhlambini uma umbuso ukuvumela ukuthi uzame futhi uwuthengisele i-fiber - kepha ama-cultivars ahluke ngokuphelele, ngakho-ke ungahle ungabi nenhlanhla. Futhi, ilayisense lakho lokutshala i-hemp libaluleke kakhulu kunesilimo esisodwa esibi esishisayo - ngakho-ke landela umthetho futhi wazi ukuthi lena yasentshonalanga yasendle futhi iyimboni esencane kakhulu edinga ukuvuthwa futhi isebenzise lelo chweba eliphephile ukugcina ibhizinisi lakho liqhubeka ngesinye isikhathi.
IHemp Litigation Iza ku-Hot
Okokugcina, uhlalisana nomthengisi wembewu uma bekuyiphutha labo ngempela ukuthi isivuno sakho size sashisa. I-Genetics ye-CBD ne-THC iyinkohliso - ezinye imbewu esimweni esisodwa zizokhula ngokuhlukile kwesinye - e-Illinois, iCherry Wine ibe yimbewu ezinzile - kepha lena imboni yokwakha izakhi zofuzo ezintsha, izilimo ezintsha - futhi asazi ukuthi yini okuzayo.
Futhi ngoba sisemaphethelweni okuphuma kwegazi lobuchwepheshe be-cannabis - ake siphinde sibuyekeze - kodwa qala uthande futhi ubhalise uma ukuthandile lokhu - ngoba uzokwaziswa ngezindaba zokugunyazwa kwe-cannabis - njalo ngoLwesithathu.
Ukuphetha: uma i-delmp-delta-9 THC yakho ye-hemp ingaphezulu kwe-0.3%, ilayisense yakho idinga isenzo esithile.
Nakhu okumele ukwenze uma okwakho isivuno se-hemp singena sishisa ku-THC.
Thola umbono wesibili emazingeni wakho we-hemp's THC
Hlola imigomo yenkontileka yakho yokuthenga imbewu ye-hemp
Shayela ummeli wakho we-cannabis
Buyekeza lokho okushiwo ngumthetho nemithetho mayelana ne-hemp enamazinga aphezulu e-THC
Xhumana nomthengisi wembewu yakho mayelana nenkinga ngamazinga we-Hemp's THC
Hambisana nemithetho ekuhlinzeka ngokuthula ethekwini elimelene ne-hemp enganaki.
Ukubhubhisa i-hemp, noma ukutakula lokho ongakwenza
Isudi sefayela, noma ngena esivumelwaneni sokuxazulula imali uma umthengisi wembewu ekhokhwa ekulahlekelweni.
Ilayisense Yokulima YaseNew Jersey: Sifakwa Kanjani Isicelo
by u-tom | Mar 4, 2021 | Ukumiswa ngokusemthethweni kwe-Cannabis eNew Jersey, Ilayisense Yokulima YaseNew Jersey, Ukukhangisa
Ungasifaka Kanjani Isicelo Selayisense Yokutshala YaseNew Jersey Ngemuva kweminyaka yemizamo ehlulekile, ngenyanga edlule kwasayinwa izikweletu ezintathu zaba ngumthetho, zivumela futhi zalawula ukusetshenziswa kwensangu yokuzithokozisa eNew Jersey, zaba ngomunye wamazwe ayi-14 okuvumela ukusetshenziswa ngokusemthethweni kwezokungcebeleka .. .
Thola The Best Isizinda Machines for Izidingo zakho Specific
by u-tom | Mar 3, 2021 | Izinhlelo Zokukhipha Insangu, Ukukhangisa
Thola Imishini Yokukhipha Enhle Kakhulu Yezinhlelo Zakho Zokukhipha Izidingo Ezikhethekile ezenzelwe abasebenzisi ukuthi bakwazi ukucubungula imisebenzi efana ne-Oil Extraction, i-Recrystallization, ne-Distillation. Ungathola umshini wokukhipha okukuvumela ukuthi uhlukanise amakhemikhali ngesikhathi se-Oyili ...
Sishayele (309) 306-1095 || e-mail Us tom@collateralbase.com